Drake Anorova Yake Pachezvake Apple Music Kutenderera Rekodhi NaScorpion | Ndinobva mac
Drake anotyora yake yega Apple Music rukova rekodhi zvakare neScorpion
Kweimwe nguva yekuve chikamu, zvinoita sekunge hondo yehuwandu hwekunyoreswa yaenda kune yechipiri nhanho, uye Apple inoda kuratidza imwe data ine chekuita nekushambadzira kwayo mimhanzi sevhisi. Mumwedzi ichangopfuura, Apple yanga ichiburitsa zvirevo umo inozivisa huwandu hwezvinyorwa kuti wanga uine rwiyo chairwo mune imwe nguva yenguva.
Semutemo wenguva dzose, uye kuti nhau dziwedzere kunzwisisika, Apple inotipa huwandu hwakazara hwezvinyorwa izvo rwiyo rwakave narwo, nemunyori anozivikanwa pasi rese kana boka, panguva yako yekutanga maawa makumi maviri nemana. Mwedzi mitatu yapfuura, Drake akatyora rekodhi yeApple Music yenzizi mumaawa makumi maviri nemana chete. With Scorpion, akarirova zvekare.
Zvinoenderana neThe Verge, dambarefu raDrake, Scorpion, yatyora rekodhi rayo rekuzvara mukati memaawa makumi maviri nemana ekutanga, ichisvika mamirioni 24, chimiro chiri akapetwa kaviri basa rake rekare Humwe Hupenyu. Dambarefu rapfuura raDrake, Hupenyu Hwakawanda, yakaridzwa kanoda kusvika mamirioni makumi mapfumbamwe mumaawa makumi maviri nemana ekutanga kuwanikwa padandemutande remimhanzi reApple.
Iyi data inoratidza, zvakare, izvo Apple Music mushandisi base inowanikwa muUnited States, uko Drake inozivikanwa zvakanyanya kupfuura kune dzimwe nyika kana kusamboenda kumberi, makondinendi, senge Europe, kunyangwe hazvo muchirevo icho Apple yatumira kuThe Verge chinotaura kuti mamirioni 170 emamiriyoni ekuberekwazve kwealbum nyowani yaDrake anoenderana munhu wese.
Spotify, rakanyanya kushandiswa sevhisi muEurope, inotaura kuti dambarefu idzva raDrake rakatambidzwa ka132 mamirioni mumaawa makumi maviri nemana ekutanga pachikuva chemimhanzi chinotenderera cheSweden firm, kunyangwe achiti iyo nhamba inogona kuve yakakwira kana uine data rese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Drake anotyora yake yega Apple Music rukova rekodhi zvakare neScorpion
Poly Bridge, inonakidza yekuvaka bhiriji
Izvi ndizvo zvikonzero zvekutenga 2017 MacBook Pro uye kwete kumirira inotevera